यी हुन् चितवनकी एक बिपन्न परिवारकी १५ बर्षिया छोरी अस्मिता, जसले संसारकै महँगो र राम्रो कलेजमा फ्रीमा पढ्ने अवसर पाईन « Bagmati Online
संसारकै राम्रो र महँगो स्कूलमा पढ्ने रहर कसलाई नहोला र ? धनी परिवारका छोराछोरीले पैसाकै बलमा भएपनि महँगो स्कुल/कलेज ताक्छन् तैपनि सबैले अवसर पाउँदैनन् । त्यसमाथि गरिबका छोराछोरीले त झन् कसरी कल्पना गर्नु ? संसारकै महँगो र उत्कृष्टमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय कलेजमा नेपालबाट एक विपन्न परिवारकी छोरीले पढ्ने अवसर पाएकी छन् । समता स्कुलमा मासिक सय रुपैयाँ शुल्कमा पढेकी अस्मिताले वार्षिक एक करोड शुल्क लाग्ने कलेजसम्मको यात्रा तय गरेकी छन् ।
पढाइ र प्रतिस्पर्धामा अब्बल भएका कारण अस्मिताले उक्त कलेजमा निःशुल्क पढ्ने अवसर पाइन् । समतामा सय रुपैयाँ शुल्कमा पढेकी उनले वार्षिक एक करोड शुल्क लाग्ने कलेजसम्मको यात्रा तय गरेकी छन् । उक्त कलेजमा नेपालबाट पनि विपन्न विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पहलकदमी भने गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गरेका थिए । महतोले धनीका छोराछोरीले पढ्ने ठाउँमा गरिबका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका थिए । पछिल्लो दुई वर्षयता महतोेले समता स्कुलमा आवतजावत बढाएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०७७ मङ्सिर २७ गते शनिवार